Global Voices Podcast 2: Manome Lanja ny Fitenintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2011 12:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Ελληνικά, English
Hiresaka momba ny Fiteny indray isika amin'ity Global Voices podcast andiany faharoa ity. Azonao jerena ny lahatsoratra maromaro momba ity lohahevitra ity “amin'ny fitenintsika sy ny Aterineto“amin'ny fitantarana manokana nataonay. Ny fomba fiteny, fanoratra, fihetsika, ny firesaka ary fifandraisana ataontsika no toa lohahevitra tsara hiadin-kevitra ka sarotra tokoa ny hisafidy izay tokony hodinihana amin'ny podcast. Antenaina fa ho hitanao ato amin'ny resadresaka ataontsika ato izay tsara tokony hohalalinina.
Anombohana azy, Solana Larsen, talen'ny fanoratana, izay manadihady ilay mpanoratra ao amin'ny Global Voices Israel Dr. Carmel Vaisman momba ny bokiny vaovao Hebrew Online (izay efa azo vidiana amin'ny teny Hebreo avy amin'ny Fivarotam-Boky Keter ). Mahafinaritra tokoa ny mahafantatra ny fiavian'ny fiteny Hebreo, ny fomba nandrosoany sy ny nivoarany amin'ny fampiasana azy araka ny fotoana.
Na miserasera na tsia, milaza betsaka ny mombamomba antsika ny fiteny ampiasaintsika na am-bava na an-tsoratra. Ny safidy amin'ny fiteny ofisialy ao amin'ny firenena iray, dia midika zavatra maro fa tsy fomba ifandraisana fotsiny ihany . Sara Moreira no mpanoratra amin'ny fiteny Portuguese ao amin'ny Global Voices. Milaza amintsika momba ny faritra iasany amin'ny asa fanaovan-gazety izy, izay tsy ara-jeografika ihany fa kosa mifanakaiky kokoa amin'ny fomba fiteny.
Tsy ny fiteny izay ampiasantsika ihany no tena mahaliana fa izay zavatra lazaintsika ihany koa. Claire Ulrich no mpanoratra amin'ny teny frantsay ao amin'ny tranokala Global Voices no sady mpanoratra mpanampy amin'ny lahatsoratra Frantsay ihany koa. Claire no manasongadina ny lahatsoratra adikan'i Boukary Konate, mpandika teny ao amin'ny Global Voices sy mampahafantatra ny fiainana ao Mali. Mitantara amintsika Angano ao amin'ny Tanàna iray i Claire izay ahafahantsika rehetra manatsoaka lesona.
Tsy natao ho zavatra tenenina sy soratantsika fotsiny ny fiteny rehetra. Fa zavatra iray ampiasantsika mba ahafahana miserasera ihany koa izy. Jeremy Clarke no lehilahy tompon'antoka tamin'ny fandrafetana sy fanaovana ny haingon-tsary ao amin'ny tranokalan'ny Global Voices. Ny hany azo ambara dia betsaka ny zavatra nataony, ary misaotra azy isika satria izy no nahatonga an'ny GV eto ka nahafahan'ireo mpiara-miasa sy mpamaky rehetra mampiasa sy miditra ao amin'ny GV. Niresaka momba izany hoe fitantanana fikambanana lehibe izany isika ary ny fomba mety misy resaka politika amin'ny fiteny fantatra.
Misaotra an'i Orb Gettarr tamin'ny Atlanteans Lemurian Candidate, misaotra an'i Mark Cotton tamin'ny Spiritualized Homage nataony , i Superbus feat. NS Fujjad! Maro koa ireo hira hita tao amin'ny OpSound.Org, The Free Music Archive na hita mivantana ao amin'ny tranokalan'ireo mpanankato. Misaotra ny rehetra ihany koa tamin'ny feo sy ny rakitsary ary ireo rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ny podcast